Britian Oo Si adag uga hadashay rag ka tirsanaan jirey argagixisada | Afrikada
Britian Oo Si adag uga hadashay rag ka tirsanaan jirey argagixisada
Afrikada, London: Wadanka Ingiriiska ayaa doonaya in uusan cafinin rag Mareykanka jooga kuwaasi Ka tirsanaan jirey ururka mintidiinta Daacish.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Britain Sajid Javed ayaa u sheegay Maraykanka in dalkiisa uusan is hortaagi doonin in xukun dil ah lagu fuliyo 2 nin oo lagu eedeeyay in ay xubno ka ahaayen kooxda Dowladda Islaamka.
Wasiirka ayaa dhambaal u diray mas’uuliyiinta Mareykanka dhambaalkaasi oo uu ku sheegayo in Britain ay ka caawini doonto Maxkamadeeynta labo xubnood oo ka tirsanaa koox musiibo aheyd oo la yiraa Beatles Gang, kuwaas oo la rumeysanyahay inay ku lug lahaayen gabood faladii ugu xumaa ee abid ka dhaca dalka Suuriya.
Waxaa jira tuhun ah in raggani mar hore ka toobad keeneen arrinkani balse dowladda Britian ayaa arrinkani gaashaanka ku dhufatay.
Labada nin ayaa waxaa Mareykanka u wadey ciidammada Mareykanka ee ka barbar dagaalamayey Kurdishka Suuriya, si Mareykanka looga dhageysto dacwadooda. Ha yeeshee, Sajid Javid ayaa golaha wasiirada ee Ingiriiska ka nixiyay kadib markii uu madaxda Mareykanka ugu baaqay in raggaasi aysan istaahilin wax ka yar daldalaad.
Majala the Times ayaa sheegtay in wasiirada Ingiriiska aysan ku feker aheyn Sajid Javid xilli go’aankaasi uu wasiirku qaatay ay ku tilmaameen in uu muujinayo ad adeyg siyaado ah oo ka dhan ah xukunka ku aadan raggan.